Nhoroondo yekambani - Union Precision Hardware Co., Ltd.
Union Precision Hardware Co, Ltd. ndiyo kambani yakavakirwa kuTaiwan yakavambwa muna 1980, iyo yaimbove kambani yaive "Union Spring Metal Co, Ltd." uye inotungamirwa muHuizhou yekuChina muna 1998. Sekuwedzera kwechiyero chekugadzira nekutengesa musika, kambani yakatamira kune 20000㎡ nyowani fekitori nharaunda kubva muna 2008, ndokushandura zita ranzi "Union Precision Hardware Co, Ltd.". Isu takaisawo mamwe makagadziri pese pese mainland China kusangana nezvinodiwa nevatengi. Pashure boka Union Metal jekiseni Kuumbwa (MIM) boka rakaumbwa muna 2010, uye vakapfuura ISO 9001: 2008, SO 14001: 2004 uye ISO / TS 16949: 2002 zvaizoitwa akapfuudzwa muna 2017.
Iyo Spring Dept.hunyanzvi mukugadzira akasiyana chaiwo chaiwo echirimo, akasarudzika-akafanana chitubu uye yemagetsi dome. Izvo zvigadzirwa zvine chaiyo yekugadzira uye yakasarudzika mhando, uye zvinoshanda kune nyika yekudzivirira indasitiri, mota indasitiri, mhoro-tech zvigadzirwa zvemagetsi, uye kutaurirana, imba yemitambo mitambo, matoyi, akamira, uye akawanda-anoshanda anodhinda etc. Isu tinozvirumbidza neakasarudzika ekugona kugona uye inokwanisa kugadzira ese marudzi ematsime neaya waya waya dhayamita anotangira 0.05mm-6.0mm uye ekunze dhayamita ari 0. 3mm-80mm. Union-chitubu zvigadzirwa zvinoitwa zvemhando yepamusoro zvinhu nekushandisa makomputa michina uye bvunzo zvishandiso's zvine advanced DCS dhijitari komputa manejimendi system. Sanganisa zana remakomputa echirimo michina uye akati wandei maJapan azvino MEC, ITAYA dzakateedzana michina yemuchina, kambani inokwanisa kugadzira zvitubu chaizvo uye zvepamusoro zvekusangana zvakasiyana zvinodiwa nevatengi. MIM Dept. -Tinoshandisa michina inozivikanwa seGerman ARBURG jekiseni muchina, Japan Shimadzu sintering furnace. Zvese zvigadzirwa izvo isu zvatinosarudza zvakaita seGerman BASF, American CARPENTER, uye Japan MITSUBISHI. Mhando dzese idzi dzinopa kugadzikana kwepamusoro uye chivakwa chemuviri. Iko kugona kwekugadzira kunogona kuvhara kunze dhayamita kubva pa6mm kusvika 90mm. Iyo uye yakanaka nzira yekugadzira kuti uwane zvakaoma uye zvakaringana zvikamu uye hukuru hwakawanda. Izvo zvinosanganisira zvinotevera indasitiri senge tekinoroji inopfeka, nharembozha, piritsi, maearphones aya marudzi ezvigadzirwa zve3C kumidziyo, magiya aya marudzi ezvigadzirwa
Kusimbirira pane iye oparesheni kufunga kwe "hunyanzvi, kuvandudza uye kugutsikana kwevatengi". Pamusoro pezvo, kuitira kuzadzikisa zvinodiwa mukuvandudzwa kwemusika wepasirese, Union Manufacturing Engineering Dept.iri kugara ichitsvaga nezve kudonhedza mutengo nekuvandudza mhando, uye nekupa zvigadzirwa izvo 100% inosangana neyakajairwa Japan Japan Standard Standard (JIS) uye American Society yeTesting. uye Zvishandiso (ASTM), mune makuru maindasitiri nyika zvinodiwa zveyakajairika zvigadzirwa. Zvigadzirwa zvedu zvakawana kuvimba kwakanyanya kubva kumakambani ane mukurumbira muJapan, America neSouth Korea. Vatengi vekambani yedu vanosanganisira mabhizimusi epasirese akadai seFoxconn, Kinpo Electronics, Sint, Amer, Primax Electronics, Epson, Mukoma, Kyocera, Canon, Lexmark, Sony, RicohNikon, Defond Group nezvimwe.
Union inovimbisa kuzvipira mukuvandudza kwekambani yako, uye iri kutarisira kuwana budiriro yakajairika neramangwana rakajeka newe. Kugamuchirwa kukambani yedu.